[object Window] | Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
Nahoana No Miady Amin'ny Adware Spyware Otrik'aretina Dia Mitsikera!
Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS > [object Window]
Manohitra Ny Otrik'aretina Spyware Rindrambaiko: Ny zavatra manan-danja indrindra azonao atao ho an'ny tenanao milina Solosaina amin'izao fotoana izao dia mametraka Miady amin'ny Adware Spyware Otrik'aretina blockers. Ny olona tsirairay dia mahalala ny solosaina viruses sy ny fomba azonao atao ny mampiasa ny iray anti-virus program mba ahazoan-manohitra ireo rindrambaiko mba ratsy. Manohitra Ny Otrik'aretina Spyware Rindrambaiko: Ny zavatra manan-danja indrindra azonao atao ho an'ny tenanao milina Solosaina amin'izao fotoana izao dia mametraka Miady amin'ny Adware Spyware Otrik'aretina blockers. Ny olona tsirairay dia mahalala ny solosaina viruses sy ny fomba azonao atao ny mampiasa ny iray anti-virus program mba ahazoan-manohitra ireo rindrambaiko mba ratsy.
Inona No Malalaka ny Rivotra Zanabolana TV?
Malalaka ny rivotra zanabolana TV dia teny ampiasaina amin'ny famaritana zanabolana marika fa azonao atao ny ara-dalàna hanintonana amin'ny fahitalavitra, na dia tsy subscription. Tsy tahaka tsotra famolavolavolana, - malalaka ny rivotra zanabolana TV tsy encrypt ny zavatra hafahafa. Fa tsy, izy io dia mampiasa MPEG-2 mba encode ny nahazo zavatra hafahafa. Malalaka ny rivotra zanabolana famolavolavolana transmits mampiasa C-tarika (iray fatetika fanomezan-ampiasaina ho an'ny fifandraisana amin'ny zanabolana izay mampiasa 5.925 mba 6.425 GHz ho uplinks sy 3.7 mba 4.2 GHz ho manao...
[object Window] – Martin&#8217;s Malaky
[object Window] - Rehetra dia manasongadina ambany ny masoandro Miaraka ny zom-sliding design sy stylish plum sy volafotsy loko manokana, ny Nokia N95 packs be dia manasongadina ny ho ara-dalàna kely fehin -. Youd manantena tsy mba mahazo mihoatra izany ve fotsiny 120g ny antso an-tariby, mirefy 99mm x 53mm x 21mm. Sliding ny finday downwards hita ny nentim-paharazana keypad, nefa raha sliding ny mifanohitra amin'izany manome anao ny fidirana amin'ny haino aman-jery ny fanaraha-maso. Ny alphanumeric keypad dia niteraka kokoa, ary respon...
Ny Heriny Ny Mampiasa Ny Iray Fitantanana Ny Mpikambana Ao Aminy Software
Rehefa ny fikambanana dia mbola tanora, ianao mety tsy manana olana mpiandraikitra ny mpikambana sy ireo hetsika. Na dia izany aza, indray mandeha ny fikambanana manomboka mitombo, mety manana ny sasany fahasarotana hametraka ny fototry ny amin'ny fampiasana fotsiny tsotra pen-sy-taratasy rafitra na fandaharam-pianarana fototra tafiditra ao ny Mac na PC. Rehefa mitranga ity, ny zavatra tsara indrindra ho anao mba atao dia ny mampiasa ny iray ny mpikambana ao aminy ny fitantanana ny software. Inona no fandraisana ho mpikambana ny fitantanana ny software? Iray ny mpikambana ao aminy admini...
Hiantohana Ny Fiarovana Amin'ny Cctv Fiarovana Ny Rafi -
Io andro sy fotoana izao, ianao tsy mety loatra complacent momba ny fiarovana ny anao manokana an-trano. Heloka bevava abounds na aiza na aiza, ary na dia tahaka ny safest amin'ny faritra no tsy afa-bela amin'izany. Heloka bevava fisorohana dia manakaiky ny tsy azo feat. Na dia izany aza, heloka bevava detection nitarika ny fanenjehana dia tsy, isaorana ny CCTV fiarovana ny rafi -. Ny CCTV ny fanaraha-maso Voafaritry ny Fananana ny CCTV fiarovana ny rafitra ho an'ny lahatsary fanaraha-maso sy ny velona ny fanaraha-maso ny resaka dia toy ny fananana manontolo ny televizionam nanokana ny fiarovana ny...
Fiarovana Ny Childrens Momba Ahy
Fiarovana ny childrens momba ahy dia angamba koa ny tena zava-dehibe ny antony maha-eto amin'izao tontolo izao mba ho zatra ny fepetra ilaina hisorohana ny olana amin'ny fiainana manokana nataon. Raha ny ankizy no tsy voatery ho lasibatra famantarana ny halatra izy ireo overwhelmingly susceptible ho lasa lasibatra bebe kokoa insidious heloka izay manomboka ny tompon'antoka ny fianarana ny maha-izy azy ny zanakao. Fahalalana ny fomba chat efitrano sy ny mailaka-miasa dia afaka manampy ny ray aman-dreny hampianatra ny ankizy mba hitondra tena am-pilaminana...
Ny Zom-Halatra: Ny Atao?
Get Copies of Your Credit Mandefa Tatitra ho an'ny your credit tatitra manaraka ny toromarika avy any amin'ny credit bureaus. Review ny tatitra carefully. Diniho creditors anaran'ny fa ianao tsy fangatahana avy credit. Koa jereo ny mombamomba anao; [object Window], adiresy, anarana, fanafohezan-teny sy ny mpampiasa vaovao. Mba your credit tatitra fara-fahakeliny isaky ny telo volana ny taona voalohany ny hosoka. Faritra sasany manome maimaim-poana ny tatitra isan - 12 volana. Faritra hafa dia hanome anao ny maro fr...
Inona No Maha-Izy Azy Ny Halatra Atao Mba Ianao
Isika matetika dia mandray ny fahalalahana ho an'ny nahazo. Inona no fantatrao ny fiainana ho afaka tampoka hanova raha youve efa lasibatry ny halatra ny zom. Raha youve efa sahirana ny isan'andro isan'andro ny fiainana ny olona tsy afaka no nangalatra ireo mombamomba anao ary racked up trosa na namono ny hosoka rehetra amin'ny anaranao eo. Inona ny zava-mitranga dia mety ho na inona na inona avy ny maha-nandà ny asa, credit na ny maha-samborina noho ny heloka bevava ianao didnt manao. Ny zom-halatra dia ny hoe matotra. Niharan'ny ide...
Inona No Heriny Ny Mijery Zanabolana Tv Amin'ny Fandraisanao Ny PC?
Solosaina hardware, [object Window], ary ny ampahany betsaka ny foto-drafitrasa fa constitutes amin'ny global fifandraisana amin'ny tambajotra no nahatonga azy io tsy hoe fotsiny ireto saingy tena tsotra fa tsy mba hankafy ny feno ny tombotsoa azo avy amin'ny zana-bolana ny fahitalavitra avy amin'ny fandraisanao ny PC. Dia ara-dalàna ity?.... ary dia izany maimaim-poana? Eny. Na izany aza fa dia matihanina eny, arakaraka ny manokana amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika ianao te-hijery. Misy elanelana ireo fomba mahazo fahitalavitra votoaty momba ny PC, anisan'izany ny hafainganana ambony Ao...
Ny Fiantraikan'ny Tutorials Tamin'ny Photoshop
Ianao izay nandre ny maro tutorials tamin'ny Photoshop azo ampiasaina ho toy ny an-tserasera lesona ary amin'ny alalan'ny CDs ary no mety ho nanontany tena raha toa izy ireo ka tahaka mahomby toy ireo fampanantenana. Taorian'ny rehetra, ianao tsy te-fandaniam ny fotoana sy ny vola amin'ny fomba fianarana fa dia tsy misy tombontsoa ho anao ao ny farany. Fa azonao tsara ny mianatra Photoshop amin'ny alalan'ny tutorials toy izany koa ianao dia tao amina efitrano fianarana-pamaritana? Eto, isika mandinika ny tombontsoa sy manohitra: Tsotra ny antony ho amin'ny fampiasana Photoshop t...
Ny Rafi-Panabeazana Najaina Teknolojia Hanampiana Ny Hijanona Mifandray
Ny teknolojia efa lasa ampahany saika isaky ny an'ilay ny workforce. Maro ny orinasa sy fikambanana amin'izao fotoana izao reaping ny tombontsoa ny mampiasa ny maro, ary ny rafi-pampianarana dia tsy misy avaka. Serasera lohamilina ankehitriny ny fanaovana azy io mora kokoa noho ny hatramin'izay ho an'ny sekoly ireo mpiasam-panjakana ka mampahafantatra ny ray aman-dreny iray childs tsy, ho an'ny ray aman-dreny mampahafantatra amin'ny sekoly iray childs tsy, ary ho an'ny mpampianatra mba hanolotra vaovao sy fanampiana mikasika isan-karazany homework assignments. Amin'ny alalan'ny fampiasana...
Chase Nofinao Chase Credit Karatra Online
Ny Aterineto dia ny lehibe indrindra discovery hatramin'ny indoor plumbing. Izany no nahatonga ny manaraka-varavarana mpifanolo-bodirindrina aminy ao Azia sy Afrika. Izany dia mitondra ny efijery tsy hoe rano miandrona amin'ny teny ihany fa koa amin'ny hamaroan'ny tontolo. Ny Mailaka dia tsy Maintsy Mandalo Mialoha ny mangiran-dratsy ny PC sy ny Tranonkala, fampiharana ho an'ny carte de crédit dia fanaintainana eo amin'ny tendany. Voalohany, ianao no tadiavina ambony sy ambany dia ambany ho an'ny pen. Avy eo, raha famenoana nivoaka ny rindranasa endrika, ianao mametraka ny tenanao ao amin'ny famindram-po ny pen. Dia ny asa pen? Izany ...
Ny Zom-Halatra: Mianatra Ny Fomba Mamaky Ny Fiainana Manokana Ny Politika
Ny iray amin'ireo tena dingana ho fiarovana ny fiainana manokana dia ny fahalalana ny fomba mamaky ny fiainana manokana ny politika. Fiainana manokana ny politika tokony ho natao misy amin'ny endrika sasany amin'ireo fotoana ianao dia nanontany ny hanome ny mombamomba. Andrim-panjakana ara-bola, ny fahasalamana ara-panatanjahantena na orinasa hafa izay hanangonana ny vaovao azo dia nanontany aseho anao ny fiainana manokana ny politika talohan'ny ianao hanome ny mombamomba azy ireo. Raha toa ilay orinasa ka tsy manana ny fiainana manokana ny politika mihevitra fa ny fandraharahana any an-kafa. Izany...
Mahomby Trano Fanaovana Teatra Mandrindra
Fotsiny satria ianao no mitady trano fanaovana teatra, dia tsy midika fa tsy maintsy mandany ny kely harena mahazo azy. Trano fanaovana teatra mety mbola miasa ho an'ireo antsika amin'ny tight budgets fa mbola te hanao ny mahita ny fahafinaretana. Miaraka amin'ny olona bebe kokoa ny maha liana amin'ny fahitalavitra momba ny haisoratra, lehibe ny trano fanaovana teatra mandrindra dia tsy maintsy maro ny trano. Trano fanaovana teatra surrounds afaka miovaova isaky ny hody an-trano. Any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, ny tranony dia ny mandrakizay malaza amin'ny efitranon'ny. Raha...
Fanjakana Kely Ny Mpitsikilo Fakantsary: Kely Kokoa Dia Afaka Ny Ho Tsaratsara Kokoa
Izahay hividy mansions amin'ny efitrano fa izahay tsy hiditra. Izahay hividy SUVs fa guzzle kokoa ny solika noho ny iray armored fiara mifono vy. Izahay hividy pizzas lehibe ampy ho ampiasaina toy ny zohindriaka mandrakotra. Saingy raha toa ianao ka mieritreritra bebe kokoa hatrany amin'ny fanatsarana ny, eritrereto indray. Eo amin'ny sehatry ny teknolojia, lehibe dia tsara seldom. Raha ny marina, maoderina famokarana dia mifantoka amin'ny miniaturization. Izay ny voalohany ny solosaina indray nameno hanorenana efitrano, androany karazany manana shrunk ny habe amin'ny matchbox. Raha telefona no indray mandeha milina izay nahitàna...
Mandahatra Ny Pc Salama Miaraka Amin'ny Solosaina Toro-Hevitra & Fitaka
Ny rehetra fotsiny, dia manana solosaina itony andro. Ny fiainana tsy misy solosaina unimaginable. Mino aho fa misy ireo izay mahatsapa fa ny fiainana tsy misy solosaina dia tsy azo. Nisy fotoana rehefa ny sakafo, fitafiana ary fialofana no hany ihodivirana fa lehilahy nanana ny. Hiroso androany, ary isika dia mbola hafa dia tsy maintsy ilaina mba ataovy lisitra -- Milaza miarahaba ny firahalahiana manodidina ny solosaina. Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao ianao dia manana solosaina, ianao no hiasa ao aminy. Anisany, misy mu...
CNC Fikandrana Software
Ny fampandrosoana ny solosaina ny isa voafehy ([object Window]) [object Window], mampiasa ny hanamaivanana ny solosaina manokana dia efa nanomboka ho revolutionise lafiny rehetra amin'ny woodworking ny indostria. Any ka manao izany dia namorona vaovao tombontsoa ho an'ny lehibe sy orinasa madinika toy izany koa ho an'ny tsirairay mpanao taozavatra. CNC dia technique ahitana ny hetsika iray router lohany dia araha-maso araka ny toromarika avy amin'ny solosaina. Ireo toromarika avy amin'ny solosaina ny rindranasa na ny lisitry ny mpampiasa maromaro ao amin'ny CN...
Ahoana Ny Fomba Hamahana Ny Olana Rejistra
Ny fanisàna farany dia hita fa ny eo ho eo 92% ny solosaina no manao kolikoly ary mety mampidi-doza ny rakitra. Amin'ny ankapobeny dia, saika isaky ny PC dia tsy maintsy mikasika ny 130+ fahadisoana momba azy ireo noho ny kolikoly na ny tsy hita popoka rejistra entries. Ka ny fanontaniana dia hoe,oviana ary nahoana rejistra ny olana mitranga? Koa mazava fa Raha toa ka ny rafitra vaovao, ianao matetika dia tsy mila ny filàna io misy fanovana atao ny rejistra noho ny zava-misy fa tsy misy vaovao fandaharana efa voapetraka sy nanala. Na dia izany aza, mihoatra ny iray p...
Iza No Handresy ny Foko – Internet Explorer na Firefox
Sambany ao anatin'ny tranonkala browsers vanim-potoana, izahay no vavolombelona tena asa ambadiky ny mpizaha hafa noho ny Internet Explorer. Ny ankamaroan'ny mpizaha ny tantara isika dia afaka mahatsiaro, lehibe sy be nanaiky ny aterineto mpizaha no Internet Explorer.
Spyware Ny Fanalana
Mety efa nividy a state-of-the-art solosaina, nefa izany dia mandeha noho izany dia tsikelikely fa ianao no namoaka ireo zavatra vakiana raha toa ianao miandry azy mifandray amin'ny aterineto. Mety mila spyware fanafoanana noho ny PC, izay angamba no maha-tampered miaraka amin'ny iray teo ivelan'ny loharano. Olana hafa mianjady, toy matetika nisy olana teo am-hafatra sy ny fiarovana ny fandrahonana no vokatry ny spyware, ary spyware ny fanalana ny dia tena mba hisorohana ny manaraka:
Aiza no Hahita CS2 Photoshop Tutorials
Ka inona no azonao atao miaraka amin'ny CS2? Ho starters, betsaka. Raha fantatrao ny fomba. Saingy raha mihevitra ianao fa masking dia inona ny ataonao amin'ny Halloween na raha toa ianao ka tsy manana hevitra izay mpanera no, ianao no mila manampy. Nahoana no tsy miezaka ny mianatra CS2 Photoshop amin'ny alalan'ny tutorials? Izay mety ho ny fomba tsara indrindra mba hanao izany satria mahazo ny hampiasa ny rindrambaiko amin'ny fotoana mitovy. Indreto ny sasany lehibe ny harena mba hanampy anao hahazo nanomboka ny CS2 Photoshop tutorials: Computer-Training-Software.com Hafa tranonkala izay manome ...
Noho izany youve naheno ny momba MIDI ary no maika dia nanangana ny anao MIDI an-trano studio? Ankehitriny ianao dia afaka manao izany noho ny an-jatony vitsivitsy dolara nandraisany ianao efa manokana amin'ny fomba mendrika ny solosaina. Raha ny marina trano studio afaka lafo BE ny mihoatra izay, nefa ny an-jatony vitsivitsy dolara tokony hikarakara ny fototra ho anao. Fa tsy maintsy nampitandrina ny, raha toa ianao ka hisambotra MIDI tazo satria betsaka no, youre mety hankanesany ho fandaniana BETSAKA kokoa ny vola, na dia ny teboka fivarotana ny vata fampangatsiahana (na ny voa) ho mahazo vola...
Na Voip Finday – Mahazo Mifandray Amin'ny Alalan'ny Aterineto
Ianao ihany nony farany dia nanao safidy ary na voip ankehitriny ny telefaonina ny rafi-piasana. Ka inona marina ve izany rehetra izany midika izany? Ny fomba dia tsy manova ny fomba ianao fifandraisana ary dia tsy hanampy anao ny lasa maro idirana ny mpanjifa ary ny mpiasa? Hanomboka, misy Saron-sarotra ny antso an-tariby fa misy iray IP telefaonina izany dia tena toy ny mahazatra ny telefaonina. Na dia izany aza, fa tsy ny conventional telefaonina ny jack, misy Saron-irika amin'ny alalan'ny izay tsy mitondra hafaliana tsy omby tratra mivantana ...
Famenoana Fotoana, Fampifandraisana Ny Fiainana: Tantara Ao Amin'ny Visioconférence
Indray andro hono, amin'ny visioconférence tsy misy. Raha toa ianao ka te-hiresaka amin'ny olona maro, tianao no nianika miakatra ny apex ny havoana, ary tamin'ny feo avo hanasa azy ireo mba hitsidika ny cornfield. Raha therapeutic sy mora, hoe afaka, na dia izany aza, ho exhausting. Tsy ho ela, olona lehibe leo hoe, noho izany izy ireo dia niezaka mifanerasera avy telegraph. Na dia izany aza, miresaka fanindriana ny feo dia tsy tena mpampiasa-firahalahiana. Ho iray raha,ny telefaonina toa ny vahaolana tsara indrindra. Ny noforonin'ny ny fahitalavitra,...
Fifanakalozana ara-barotra Miaraka Amin'ny iPod
Isaky ny misy zavatra vaovao, hahafinaritra sy ny revolisionera dia nampiditra ny ankapobeny, ny efa ho iray voalaza fa hafa ny vondron'orinasa, orinasa sy ny tombontsoany te hitch ny branding voankazon'ny revolisiona fa ny fiaran-dalamby. Ary ny Paoma iPod Nano, izany, ary dia mbola tsy misy hafa. Ny Apple iPod transformed ny fomba ny izao tontolo izao dia mihevitra momba izay mandray izany ny mozika. Taoriana ny famoahana azy, ianao tsy afaka an-tongotra manodidina rehetra hip metropolitan an-dalambe sy hahita ireo teo noho eo arrow fotsy ea...
Mahomby ny fomba hahazo vola ho an'ny ny orinasa mitarika ho lehibe hoavy ara-bola ny fahombiazana
Araka ny supervisor iray lehibe orinasa, iray amiko ny ahiahy goavana indrindra no mametra ny fandaniana araka izay tratra ny miantoka bebe kokoa ny orinasa fahombiazana. Izy dia tsy anisan'ny asako andraikitra mba hampihena ny fandaniana sy foana mieritreritra lafo-mahomby ny fomba hanohy ny fandraharahana ao ny departemantan'ny. Rehefa ny lehibeny nividy feno vaovao finday rafitra, Nanapa-kevitra aho fa tokony hivarotra ny taloha TAO&T fitaovana miverina ny orinasa izahay nividy vaovao iray avy.
[object Window] – Ahoana Ry Zareo Ny Asa?
Ahoana no fomba ireo beeping zavatra asa ny olona mitondra manodidina ny momba ny belts? Maro ny karazana pagers fa, ataon -, ny rehetra nataon'ny tsara, taloha- fashioned onja-peo. Misy olona mandefa anareo hafatra an-tsoratra miaraka amin'ny dian-feo finday na mety koa ho nandefa mailaka sy ny hafatra ampitaina ny zavatra momba ny fehikibo, izay dia emits - maneno na nahare hovitrovitra mafy be ny miteny ianao youve nahazo hafatra. Ity no tratra amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo teknolojiam-pifandraisana ataon -, [object Window].
Ny fomba Speed Up Ny Dial up Fifandraisana.
Fantatrao ve azonao atao dia mampiakatra ny hafainganam-ny dial miakatra ny fifandraisana araka ny maha-betsaka maha-zava-dehibe ny 7? Nahoana no nanorim-ponenana ho an'ny crippled 56k rohy rehefa afaka niaina ny hafaliana noho ny dial up mpanafaingana? Indro ny lowdown.
Embedding Iray 3270 Emulator ao Anatin'ny Sehatr'asa-monina Mpanjifa ny Tolotra Rindranasa Suite
Lehibe, risika-adverse ny fiantohana firms mampiasa ny PASIPAORO mba hampidirana voaporofo IBM mainframe ny rindranasa iray azo antoka, ny saran'ny mahomby sehatra lehibe Indrindra ny fiantohana ny orinasa, ny banky sy ny tolotra famatsiam-bola ny fikambanana mbola hiankina amin'ny IBM mainframe ny rindranasa ho tanterahina ny fandraharahana. Amin'ny fanaovana izany, ho an'ny maro, ny fampiasana 3270 terminal emulation ho toy ny fomba ny miditra voaporofo rindranasa tranainy mbola masontsivana. Ny Terminal Fanaraha-maso ny fahasahazan'ny ny Zephyrs PASIPAORO Mpampiantrano Integr...
Ny Fomba Mora Speed Up Ny Pc
Ity ny faha-tsindraindray gratification. Olona afaka mandefa mailaka ho samy hafa tokoa, hahita sy hiresaka amin'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao, ary koa mandoa vola noho ny saika na inona na inona tsy misy andraso amin'ny rehetra. Azonao atao matetika maka ny instantaneous valiny tianao, satria ny solosaina dia lasa bebe kokoa sy matanjaka kokoa isan'andro. Na dia izany aza, nandritra ny fotoana solosaina dia ny manomboka mandefa slower sy slower raha tsy hoe ny sasany fikarakarana hetsika dia hotanterahina mba speed up ny pc. Vitsy ny hetsika fa ianao dia afaka ...
Finday Isaky Ny Paosy
Finday ([object Window]) na finday efa nanana fiantraikany lehibe eo amin'ny fomba izahay hitondra ny fiainantsika. Ao todays izao tontolo izao, izay fanovana ihany no sanda tsy miova, finday efa angamba miaraka amin'ny maro ny vaovao ara-teknolojia fahasahazan'ny. Nisy fitomboana goavana ao amin'ny fampiasana ny finday rehetra manerana izao tontolo izao ary ankehitriny efa ho aminareo tsirairay dia manokana ho an'ny finday. Inona no nanomboka tamin'ny 1960 ho bulky radio fifandraisana fitaovana ampiasaina amin'ny fotoanan'ny ady, amin'izao fotoana dia lasa kely poc...
Vonona Ny Hanao Sary Mahagaga Fitaka? Mianatra Ny Adobe Photoshop 7
[object Window] 7 dia azo antoka fa mety ho iray amin'ireo mahomby indrindra catalysts tamin'ny haino aman-jery, fialam-boly sy ny kolontsaim-bahoaka. Izany no tsy mahagaga ny olona flocking hianatra ny fomba fampiasana izany. Adobe dia efa nivoaka maro ambony karazany Photoshop (ny farany ny maha-CS3) nefa Photoshop 7 mbola be mpampiasa miaraka amin'ny maro ny mpampiasa aterineto. Ity 'ny kinova taloha' ny Photoshop doesnt manana ny extras ny vaovao hita moa fa mety mbola kick up sasany mahagaga fairy vovoka. Indreto ny sasany amin'ny aterineto ny hanampy loharanon-karena ...
Mora ny Fifandraisana Put Zanabolana TV Momba Ny PC
Ho an'ireo izay te-faharoa amin'ny fahitalavitra ao an-tranony, saingy reluctant handany ny vola, ianao dia afaka mihevitra ny mijery zanabolana TV momba ny PC. Raha tsy maka midadasika fahalalana ny solosaina sy ny zanabolana, izany dia mandray roa bebe kokoa avy eo ny hardware. Raha ny sasany amin'ireo orinasa ireo dokam-barotra fa amin'ny alalan'ny solosaina sy ny fifandraisana aterineto, niaraka ny rindrambaiko azo ampiasaina ho amin'ny iray ora saram -, ny olona iray dia afaka hanomboka nahazo fahitalavitra momba ny solosaina indray ny t...
Ny fidirana lavi-toerana fandaharana usefull sy mahomby amin'ny fomba maro. Ny tena ifantohan'ny izao ny teknolojia dia tsotra manao ny birao mbola azo idirana avy na aiza na aiza izay manana fifandraisana aterineto.
Vaovao mba gaming, rehetra ianao dia mila mahafantatra ny mikasika ny Tselatra gaming vohikala
Liana amin'ny gaming, misy vohikala fa aleo ianao play tsy misy vidiny. Izy rehetra mila manana dia Macromedias Free Tselatra Mpilalao.
Fanatsarana ny Tsipelina tamin'ny Lalao
Ny fomba mamaky teny ny lalao afaka manampy hanatsara your childs tsipelina nefa manana ny sasany amin'ny fahafinaretana.
Fototra Lineage 2 Adena Fambolena Guide
Ny fananana ny ampy Lineage 2 adena ny lalao dia manan-danja kokoa noho ianao tsy mety mino. Ianao mila manana goavana habetsahan'ny L2 adena hividy ny hafainganam-mila anao. Manomboka mivoaka tsara Lineage II fambolena toro-hevitra dia anisany manana izany rewards taty aoriana.
Ny Microsoft Xbox 360 Konsoly: Matanjaka Gaming ao anaty Boaty
Ve ianao raha jerena ny fividianana ny vaovao Xbox 360? Raha izany, ianao dia mianatra amin'ny Xbox 360 atonta up hafa ny rafi-gaming, anisan'izany fanampiny dia manasongadina nanampy ho an'ny tanjona farany gaming traikefa.
Mpanohitra Sy Ny Manohitra Ny Vaovao Ipod Video
Tamin'ny 12 aprily 2005, ny orinasa Apple nanambara ny ho avy iPod video. Ny vokatra dia ny momba ny hamoaka vaovao safidy ny periferika, midika izany ny tokony ho izy ny nilalao horonantsary. Toy ny misy vaovao ny zavatra izay hita ao amin'ny an-tsena, ny iPod lahatsary niezaka hahazo ny mpankafy sy ny tsikera, mandritra izany fotoana izany. Noho ny zava-misy fa vaovao sy ahitana zava-baovao ny zavatra izay nitondra ny zavatra iray hafa ny foto-kevitra momba ny iPod, ny vaovao iPod lahatsary nanomboka maro ny adihevitra mikasika ny mora ny fampiasana ny, herinaratra...
Solosaina rindrambaiko dia ny fitambaran'ny programmes sy ny rindranasa izay mpanera miaraka amin'ny ara-batana anisan'i ny solosaina, ny hardware, mba mandefa ny mpampiasa hanao manokana functions sy ny asa. Misy roa fototra karazana rindrambaiko, fantatra amin'ny maha-rafitra rindrambaiko, izay tompon'andraikitra tamin'ny fototra functions ny solosaina, sy application software, toy ny Teny Fikirakirana programmes, izay mandefa ny mpampiasa hanao amin'izao fotoana manokana asa, [object Window]. fanoratana. Nisy niasa s...
Ny Fivoaran'ny Ipods Avy Amin'ny Endrika Mba Ny Ipod Video
Ny vaovao sy ny malaza indrindra fanavaozana ao iPod ny teknolojia, azo antoka, ny iPod video. Mbola, mahazo izany zava-baovao periferika fotsiny ny vokatry ny ela amin'ny alalan'ny fikarohana ny tantara ny iPod fanaovana tamin'ny http://[object Window] . Ny endrika ny iPod dia owed amin'ny fitomboan'ny haivarotra ny fangatahana: ny tsy fisian'ny kalitaon'ny digital music mpilalao dia noticeable ho mahaliana ny mpanjifa, mifanohitra amin'ny tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny fitaovana nomerika, toy ny fakantsary, [object Window].
Psp Ny Lalao Dia Mety Ho Sintonina
Ny PSP lalao rafitra dia mihoatra lavitra noho fotsiny ho an'ny lalao milalao. Ve ianao miala fa mora ny misintona ny zavatra hafa? Mampidina sy milalao lalao momba ny PSP dia tena mora ny-eny fa na dia ny ara-teknika nanohitra. Azonao atao ny mametraka ny lalao an-solosainao ny fahatsiarovana, avy eo famindrana azy ireo ny PSP fahatsiarovana ny langilangy ary avy eo famindrana azy ireo ny rafitra PSP. Ary, misy ara-bakiteny an'arivony lalao misy. Feo mora? Tsara izany. Fa misy kokoa mba download avy ny aterineto ...
Dia Kahie Safidy Tsara Noho Ny Sehatr'asa?
Raha aterineto nanao izao tontolo izao iray manontolo tanàna, avy eo isika dia mety ho toy izany koa ny milaza fa kahie nanao izany ny global zanatany holande avy. Amin'ny desktops, zavatra maro no tsindrio raha miala aminay; kahie shorted ny halavirana. Ankehitriny isika dia afaka mitondra ny global zanatany holande avy ao amin'ny soroko. High-end ny teknolojia ao ny lap, angamba, mila na inona na inona conquer ny tontolo convergence. Ny tombony lehibe ny kahie dia ny hoe io no manome antsika fahatsapana portability sy ny fivezivezena. Mitady critically, portability ihany no feat...
Ny Tombontsoa Sy Manohitra Ny Zanabolana TV Ho an'ny PC
Ny olona manerana ny firenena amin'izao fotoana izao efa mandeha amin'ny FAHITALAVITRA ao an-tranony. Inona no indray mandeha ny zavatra iray fa toa ho sarotra ny mazava dia izao lasa ny tokony ho izy ny fomba fiainana. Mitovy manana ny marina ho an'ny solosaina, satria ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao no manana solosaina ihany koa, ary izy ireo koa dia ho lasa ampahany ny fiainana andavanandro. Tena fotsiny io resaka fotoana mialoha ny solosaina sy ny zanabolana TV hita samy hafa. Ankehitriny ny vahoaka dia afaka mankafy ny zanabolana TV ho an'ny PCs tsy mandrakizay ny fananana mba handao ny birao. Maro ny olona ha...
Vaovao iPod Lalao
Izaho tsy hiteny hoe ny azo antoka dia rehefa fantatro aho kaikitra nefa aho ny daty ny receipts (11/15/06). Heveriko fa izaho no tara ny ny iPod antoko, kanefa tsy Nandalo tsy nahita dingana iray hatramin'ny aho no nandray anjara tamin'ny Buck, ny iPod. Maro no nahazo 3 amin'izao fotoana izao, ny iray fotsiny ho an'ny sarimihetsika, ary ny iray hafa ho an'ny mozika sy ny iray ho an'ny data ary Im ny fifampiraharahana amin'ny fifandraisana any Shina ho 5 bebe kokoa. iPod dia ny atidoha zanaka Steven Asa, Apple miteny guru sy manerana genius. Mihoatra ny 22 tapitrisa ipods efa amidy ho ANTSIKA olon-dehibe, izay habetsaka...
Ianao Owe Ny Laptop Sy ny PC Mba Ho Fototra maha-Olombelona Ego Sy Ny Frailties.
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra ny fivoaran-draharaha mitarika ho amin'ny solosaina manokana ny revolisiona no noforonin'ny ny semiconductor. Na ny transistor ao 1949. Ny feat dia tontosaina araka ny injeniera ao amin'ny Bell Labs. Ny transistor dia tsy misy mihoatra ny iray tokana fanjakana elektronika asehoy fa nosoloina ny zavatra lehibe kokoa vacuum tubes ny andro. Ny transistor jifaina tamin'ny mbola tsy fahefana manao ny marina ihany ny asa maha-lehibe kokoa, hot tubes ny andro. Noho izany solosaina rafitra natsangana ...
Ahoana No Mamaritra Ny Kahie Fa Mihaona Ny Fitakiana?
Nandritra ny folo taona lasa nisy goavana fitomboana ao amin'ny fampiasana kahie na laptop solosaina. Ny vokatra dia ny kahie dia miadana tianao ny nentim-paharazana sehatr'asa solosaina avy any an-trano toy izany koa ny avy amin'ny birao. Maro ireo karazana, ny teknolojia sy ny marika momba ny kahie misy ao an-tsena izay tena lasa sarotra ho an'ny mahazatra ny mpampiasa amantarana ny tsara indrindra mifanaraka ho azy na ny mila. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao maka vitsivitsy toro-hevitra amin'ny fomba selec...
[object Window]: Ny Mahagaga Ny Tsy Misy Mpampitohy Ny Teknolojia
Bluetooth ny teknolojia nahazo ny anarany avy ny Viking Mpanjaka Harald Bluetooth ao Danemarka, izay malaza nandritra ny fotoana noho ny lafatra fahaiza-manao ny fanelanelanana. Izy no mifandray amin'ny olona maro ary dia admired araka ny lehilahy ity manan-talenta. Milasy, raha ny teknolojia dia tsy namorona, ny anarana mihitsoka. Ity wire free teknolojia manome alalana ny iray mazava be izao famaritana ny fitaovana mba ho afaka ny fifanakalozana vaovao miaraka amin'ny fanampian'ny 2.4 GHz fohy-onjam-peo zavatra hafahafa tao anatin'ny elanelana hatramin'ny 120 tongotra. Ny periferika l...
Rehetra Mikasika Ny Linux
Inona no Linux? Linux dia rafitra ampiasainao noforonin'ny Linus Torvalds nandritra ny andro toy ny mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i helsinki izy io. Linux dia noforonina ary natao mba ho ampiasaina ho toy ny safidy iray na substitute ny hafa indray, ny rafi-ny maha-ampiasain'ny solosaina ireo mpampiasa, toy MS-DOS, Fikandrana, [object Window], sns. Linux dia tsy misy rindranasa na ny amin'ny hametrahana ny fandaharana toy ny teny ratsy ao amin'ny biraon'ny suite. Ny Tantara Fohy Raha mianatra any amin'ny Anjerimanontolo avy ao helsinki, Linus nampiasa tamin'io ...
Linux Eo Amin'ny Sehatr'asa?
Linux dia "[object Window]" rafitra ampiasainao orizinaly mivoatra araka ny injeniera iray avy any Finland antsoina hoe Linus Torvalds. Linux dia navoaka sy nampiasàna ny iray vao maraina tamin'io GNU "[object Window]", na GPL, araka izay mpampiasa rehetra izay te-hiasa miaraka amin'ny Linux dia afaka manao izany. Na izany aza dia nivoatra considerably nandritra ny taona maro, dia mbola eclipse ny lazan'ny Microsoft ny Varavarankely rafitra ampiasainao amin'ny mpanjifa sy ny fandraharahana madinika sehatra- izay anjakan'ny "sehatr'asa" solosaina...
Ny Iomega Zip Kapila: Haingana Ny Tantara
Nandritra ny taona maro ny zana-kapila angamba ny kapila nibahana ny angona tahiry an-tsena ho an'ny mpampiasa an-trano satria izy ireo dia nanolotra vita ny data fitahirizana. Ok mampiasa floppies dia akward, miadana sy tena mampisalasala saingy tamin'izany fotoana izany dia isika rehetra dia. Dia miaraka tonga ny Zip kapila sy izao tontolo izao ny angona tahiry niova nandritra ny alina noho ny mpamorona ny Zip kapila - [object Window]. Tsy misy intsony ireo ianao dia voafetra ho iray paltry 1.4 MB kapila fitahirizana - ankehitriny ianao dia afaka mameno ny 100MB iray tokana Zip kapila. Taty aoriana ity niakatra ho, ...
Zanabolana TV Ho amin'ny Solosainao
Amin'ny alalan'ny fandraisanao ny solosaina sy ny Aterineto, azonao atao ny maka izay miendrika fialamboly. Ny fialam-boly Im manoratra momba ny zava-zanabolana TV ho amin'ny solosainao. Inona ianao tena mila ny zo software. Miaraka amin'ny zo software azonao atao ny manana fahafahana miditra mijery iraisam-pirenena an'arivony zanabolana FAHITALAVITRA momba ny PC. Ny ampahany lehibe momba izany ianao dia tsy mila fanampiny hardware na PC TV karatra rehetra dia mila ianao dia fifandraisana Aterineto. Ny fialam-boly ho azonao amin'ny zanabolana TV...
Misy Topimaso Ny Blackberry
Raha tsy hoe ianao no nandany ny ampahany vitsy lasa izay nandritra ny taona maro tao amin'ny zohy na ambany vato, ianao no nandre ny Blackberry. Na dia izany aza, ary raha milaza izany, na dia mety efa nandre ny Blackberry, mety ankehitriny fantatro marina ny zavatra iray Blackberry no fototry ny. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia efa vonona ny hanome anao ny sasany fototra vaovao momba ny Blackberry. Ao amin'ny teny fototra, - Blackberry dia andalana iray ao amin'ny finday ny fifandraisana fitaovana izay mamela anao manatanteraka maro samihafa ta...
Data Ezaka Fanarenana
Manan-danja sy ny tena iankinan'ny ain-dehibe singa ny solosaina ny fiarovana ny fahafahana alaivo ny vaovao fa efa very. Data ezaka fanarenana ny rindrambaiko vahaolana handraikitra goavana habetsahan'ny fotoana, vola, ny aretina an-doha sy hassle. Impiry ianao no efa miasa ao amin'ny tahirin-kevitra manan-danja ihany no mba manana ny solosaina hijanona na vonoy alohan'ny azonao atao ny mandraikitra ny asanao? Mitranga izany indraindray, ary ny iray goavana nuisance rehefa izany dia. Soa ihany, misy fomba maro azonao atao hatrany hiaro sy hitahiry y...
Ny maha-zava-dehibe Ny Anti-otrik'aretina Rindrambaiko
Misy solosaina sy ny mpampiasa aterineto, raha tsy jerena ny antony fa izy ireo dia an-tserasera, mila manana ny farany antivirus software voapetraka ny rindran'asa momba ny solosaina. Na dia nieritreritra ny ankamaroan'izy ireo fandaharana tonga efa voapetraka amin'ny solosainao sy malalaka, antivirus software dia tena tena mba azo antoka sy uninterrupted ny fampiasana ny aterineto. Izany ihany koa milalao sy andraikitra lehibe amin'ny solosaina fiarovana, toy izany dia afaka hiaro ny ain-ny tahirin-kevitra sy rakitra avy ho simba na ho very mandrakizay.
Ny fiarovana ny Fakantsary DVR: Fitadiavana Ny Karazana Fa Suits Ianao
Tsy ny rehetra ny fiarovana ny fakantsary Nomerika amin'ny Lahatsary Recorders, na DVRs, dia noforonina hitovy. Tadidio ity ho toy ny ianao dia jereo ho fiarovana ny fakantsary DVRs noho ny fandraharahana. Misy lehibe DVRs, tsara DVRs, ary DVRs mahatsiravina noho izany ianao dia tsy afaka ny hilaza ny zavatra ianao mijery. DVR mijoro ho Nomerika ny Lahatsary Recorder. Izany dia haingana ary mora kokoa ny mandrindra noho ny tsy nomerika sy ny rafi-analog. Fanampin'izany, izany dia manome tsindraindray ny fidirana ho voarakitra na mivantana lahatsary. Ianao tsy mila miahiahy momba ny fitahirizana, koa, satria ny bulk ny vid...
Zanabolana Tv Momba Ny Pc – 5 Zava-Misy Ianao Mila Mahalala
Maro amintsika no efa nandre izay rehetra momba ny ambony ny famaritana na ny fahitalavitra, plasma sy ny HAZAVAN'NY televisions sy nomerika ny fampielezam-peo, saingy fantatrao ve fa misy mahagaga nivoitra teknolojia dia mamela antsika mba hijery maimaim-poana zanabolana TV amin'ny alalan'ny Aterineto? tsy vitan'ny hoe,saingy azonao atao ny mandrakitra ny rehetra ireny zanabolana TV mampiseho ny momba ny PC, ary hiverina ireo ary hijery azy ireo taty aoriana, ary: solosainao ho ny big efijery TV sy mijery izany tsy misy. Inona hardware ve aho mila? Hijery zanabolana TV momba ny ...
Toro-Hevitra Ny Hitazona Ny Laptop Safe
Ny fananana laptop solosaina ireo andro fotsiny ny maha-zava-dehibe toy ny fahazoana ny sehatr'asa milina. Mila manana fahafahana miditra amin'ny aterineto, mailaka-nao, sy ny hafa manan-danja data-pahataperana avokoa ny rehetra. Ny zava-dehibe ny mahatsiaro fa mitovy ihany ny olana fa data ezaka fanarenana, spyware sy viruses mety hahatonga ny momba ny PC afaka ihany koa ny mahakasika ny solosaina laptop. Fiarovana ho anao portable milina ihany koa ny doubly manan-danja noho ny loza mety tafiditra ao ny fananana ny solosaina izay nangalarina. Aminy koa ny tena zava-dehibe mak...
Nokia Finday Fakantsary | Sary Nomerika Amin'ny Nokia Finday Fakantsary
Misy miafina ny mpaka sary ao amin'ny tsirairay. Maro amintsika fotsiny ny filàna ny fakantsary sy ny fotoana iray. Fakantsary finday manome antsika ny portable ny teknolojia mba hahazoana ny ankamaroan'ny fotoana rehetra. Maro momba ny finday finday ankehitriny tonga ny fitaovana miaraka amin'ny teknolojia avo lenta ny fakantsary izay mety hahatonga anao nisy tsindraindray nomerika mpaka sary. Mandroba ny mahamay fifanarahana amin'ny farany finday fakantsary tsy ho mora kokoa miaraka amin'ny maro ny mpitatitra sy ny varotra specials misy ireo andro. Ho farany fampiasana ny teknolojia nomerika amin'ny fakantsary p...
Data Fiber Optics Malefaka Hafainganana Fampitana
Nahoana no nanorim-ponenana ho an'ny miadam-pandeha, avo dia avo ny jiro ny fandaniana sy ny teknolojia namorona iray an-jatony taona maro lasa izay raha afaka manana ny farany indrindra ao data fampitana amin'ny tsy ampy amin'ny vidiny ary imbetsaka ny hafainganana? Amin'ny alalan'ny fampiasana ny vera na plastika threads mba hampitàna ny angona ny fiber optics dia ho avy ny teknolojia. Iray bundle ny vera threads afaka transmitting hafatra izay niofo ho malefaka onja dia inona no mahatonga ny data fiber optics. Ny fizarana iray karazana ara-teknika amin'ny antsipirihany ao amin'ny mikoriana...
Avo dia avo ny Famaritana ny FAHITALAVITRA famahana olana: Ny Fototra
Maninona Isika Na Dia Mila Fandaminana MySpace?
Review Of Scarface Amin'ny Sony Playstation 2
Iraisana pitfalls ho mandrafitra ny manokana CD/DVD duplication replication fehin -
Ny Ahitana Ny Tsara Indrindra Ny Fianakaviana Finday Drafitra
Ny Teknikam-Manampy Anao Adware Fandaharam-Ny Fanalana Ny Efa Ananana
Cruise Ho Honeymoon
Ahoana no to throw iray poker alefa
Tsy Ny Rehetra Hanafoanana Cassettes No Namorona Mitovy
Andalana iray Isaky ny Tovan'ny
Ny Zava-Drehetra Ianao Foana Ny Te-Hahafantatra Ny Momba Ny Tena Izy Toa Ny Rafi-Detection
Leveraging Nomerika Vaovao Vokatra
Baccarat Tantara sy ny Amerikana Baccarat Fitsipika
Ny Gps Ny Fanehoana An-Tsary Iray Manontolo Ny Vaovao Fomba Mijery Ny Zavatra
Ny ray aman-dreny Torolalana ho Online Gaming, Ampahany 1
Maimaim-poana Rindrambaiko SMS any India
Mpiasa Roster Ny Rindrambaiko Eliminates Moana Akory Spreadsheets Fa Fandaniam-Potoana Sy Vola
Momba Ny Fakan - – Mastering Indrindra Hanampy Gadget
Ny Apple Iphone – Nahoana?
C Fandaharam - (38)
Ny fifandraisana (197)
Solosaina Fandaharam - (46)
Solosaina Rindrambaiko (48)
Sarotra Ny Kapila (387)
[object Window] (392)
Ny tambajotra (207)
[object Window] (732)
Lalao Milalao (47)
Famolavolavolana Teny (40)
Ny mpizara (459)
[object Window] (1,514)
Mpizara Tranonkala (59)
1 / 131234567...Manaraka"Farany"